Iindaba Ezixhamlayo IXXUMUMX Ebusika 5 | I-Foundation Foundation
Ikhaya I5 Winter 2018
Ngosuku lwe-Internet olukhuselekileyo ngoLwesibili i-6th NgoFebruwari oku kusisikhumbuzo esincinci sokuba kutheni kufuneka sibe sezinzwaneni zethu malunga neengozi ezinokubakho kwi-Intanethi, hayi ubuncinci kubantwana. Kolu hlelo lwasebusika sigubungela iindaba malunga-nemodeli entsha yeshishini le-porn ukuqala 'ukuhlawula' abantu ukuba babukele iphonografi; Udidi olucetywayo lokuchonga 'lokunyanzelwa kokuziphatha ngokwesondo' nguMbutho wezeMpilo weHlabathi; iinzame zeshishini le-porn lokuphambuka kulo; amathuba amatsha okufundisa i-CPD; I-snippet yeendaba malunga nokuba elinye ilizwe lihlangabezana njani nokudlwengulwa kwe-intanethi; inkxaso ngokuyeka kunye nosuku olukhethekileyo lweValentine Day ukuzonwabisa ngeentliziyo zethu.
Ukuhlaziywa kwansuku zonke, silandele kwi-Twitter @brain_love_sex uze ubone iiblogi zethu zeveki kwikhasi lasekhaya. Uqhagamshelwano mary@rewardfoundation.org ukuba ungathanda ukufumana nayiphi na isifundo ngaphakathi kwoluhlu olubhekiselwe ngakumbi.
Abasebenzisi Bakhokhelwa Ukubukela I-Hardcore Porn
Umbutho wezeMpilo weSizwe uzimisele ukuzisa uluhlu olutsha lwezengxaki zokuziphatha zesondo
Ipropaganda Yoshishino Lwezonyanya Ifuna Ukuthintela Ukuxilongwa Okutsha
Ukuxhatshazwa ngokwesondo kwindawo yokuSebenza
Okokuqala kwiiNkundla: iSweden ivalelwe ukudlwengulwa kwabantwana kwi-Intanethi
"Ndingenza ntoni? Abasetyhini abasetyhini babika iidrawma ngeefoto ze-Nude "Uphando olutsha
Ukufundisa ii-Workshops zokuqala ze-RCGP kwi-Impact of Internet Pornography kwiMpilo yengqondo kunye neMpilo ngoMeyi.
Uncedo oluvela kwiqela leNoFap ngesisombululo esithile soNyaka oMtsha
Ukufundisa KwiZikolo- Abafundi Amazwana
UngaluPhucula njani uSuku lweValentine yakho
I-intanethi ye-intanethi isetyenziselwe ukubiza iipounds ezimbini kwaye kunzima ukufikelela. Emva koko yaba yinto ekhululekile kwaye iyatholakala ngokubanzi kwii-smartphones nakwezinye iifowuni ze-intanethi. Iindaba kweli veki kukuba abadlali abakhulu kwi-industry ye-dollar yeebhiliyoni zeebhiliyoni bayayidlala umdlalo wabo ukuze 'bahlawule' abantu ukuba babone i-hardcore porn, nakuba i-crypto-currency. Nali ibali eliqhutywa ICawa yamaXesha (4 Feb 2018) apho besicatshulwe khona. Intatheli ekuqaleni yayichonge ngokuchanekileyo 'njengekhankaso kwi-intanethi ye-intanethi' kodwa oko kwaguqulwa kwaba "ngokuchasene ne-intanethi ye-intanethi", mhlawumbi ngabahleli abangaphantsi. Eyona nto iphambili: imali ethe kratya kumzi-mveliso we-porn osele ucebile kodwa iingxaki zempilo ezinxulumene neziyobisi kwi-NHS ebotshelelwe yimali, ulwaphulo-mthetho olongezelelekileyo ngokwesondo ngenkqubo yobulungisa kulwaphulo-mthetho olugcweleyo kwaye okona kubaluleke kakhulu, umnqweno omncinci wobudlelwane bokwenyani obuhamba kunye ukwaneliseka ngokwesini ngokubanzi.
I-WHO iza kukhupha incwadi yeshumi elinanye ehlaziyiweyo yoHlelo lweZifo (i-ICD-11) incwadana yokufaka iikhowudi kamva kulo nyaka. Isetyenziswa ngabaqeqeshi bezempilo kwihlabathi liphela ukuchonga zonke iintlobo zezifo. Incwadana yokuHlola kunye neNgcaciso yeNgcaciso yezeMpilo yeNgqondo, okwangoku kwi-iteration yayo yesihlanu (DSM 5, 2013), iyafana naleyo isetyenziswa ikakhulu e-US kodwa ayixhaphakanga kunxweme lwabo. Njengoko uphando kwimimandla emitsha yezifo lusakha, amangenelo amatsha avela. Ukuza kuthi ga ngoku, kunye nokuqwalaselwa kwefuthe kwi-intanethi ekuziphatheni nakwimpilo, i-ICD-11 ikulungele ukwazisa iindidi ezintsha zengxaki kubandakanya "ukunyanzelwa kokuziphatha ngokwesondo".
Ileta e Ihlabathi leengqondo (I-17 yeVoln: 1 Feb 2018) ngeenzululwazi eziphambili ezibandakanyekayo ekuphuhlisweni kwencwadana entsha, ichaza indlela eye yafika ngayo kule ngxaki. Nantsi inkcazo:
"Umzekelo ubonakaliswe kwenye okanye ngaphezulu kwezi zinto ezilandelayo: a) ukubandakanyeka kwimisebenzi yezocansi eziphindaphindiweyo uye waba ngundoqo ephambili ebomini bomntu kwinqanaba lokunganaki impilo kunye nolondolozo lomntu okanye ezinye izinto ezinomdla, imisebenzi kunye neemfanelo; b) umntu wenze ezininzi iinzame ezingaphumelelanga zokulawula okanye ukunciphisa ngokuphindaphindiweyo ukuziphatha ngokwesondo; c) umntu uyaqhubeka nokubandakanya ukuziphatha ngokuphindaphindiweyo ngokwesondo nangemiphumo emibi (umz., ukuxhatshazwa kobudlelwane ngokuphindaphindiweyo, iziphumo zomsebenzi, impembelelo embi kwimpilo); okanye d) umntu uyaqhubeka nokubandakanya ukuziphatha ngokuziphatha ngokwesondo nangona athola ubuncinane okanye akanelisekanga kuyo.
Ukukhathazeka malunga nokuziphatha ngokwezesondo ngokwe-overpathologizing kucaciswe ngokucacileyo kwisikhokelo sokuxilongwa esicetywayo sengxaki. Abantu abanamanqanaba aphakamileyo anomdla nokuziphatha (umz., Ngenxa yokuqhutyelwa kwezesondo eziphezulu) abangabonakali ukulawulwa kakubi ngenxa yokuziphatha kwabo ngokwesondo kunye nokukhathazeka okukhulu okanye ukuphazamiseka ekusebenzeni akufanele kufumaneke ukuba ne-compulsive disorder behavior disorder. Ukuxilongwa akufuneki ukuba kubonelelwe ukuchaza amanqanaba aphakamileyo anomdla kunye nokuziphatha (umzekelo, ukuhlaziya i-masturbation) eziqhelekileyo phakathi kwabantwana abaselula, nangona xa kudibaniswa noxinzelelo.
Izikhokelo ezicetywayo zokuxilonga zigxininisa ukuba ukuphazamiseka kwengxaki yokuziphatha ngokwesondo akufanele kufumanwe ngokusekelwe kwingcinezelo yengqondo enxulumene nezigwebo zokuziphatha okanye ukungathandeki malunga nezifiso zobundlobongela, izibongozo okanye iimpawu ezingenakuthathwa njengento ebonisa ukuguquka kwengqondo. Iziphathamandla zesondo ezenza umzekelo we-egodystonic zingabangela uxinzelelo lweengqondo; nangona kunjalo, uxinzelelo lwengqondo ngenxa yokuziphatha ngokwesondo aluvumelekanga ukuxilongwa kweengxaki zokuziphatha ngokwesondo. "
Icandelo lezonyango zeebhiliyoni ze-dollar lifuna ukukhusela inzuzo kunye nenkunkuma kwanoma yiyiphi into yokuba ukusetyenziswa koononophelo kunokunyanzelisa. Ekuvukeni kwe-Weinstein / Spacey, i-#MeToo ingxoxo kunye ne-ICD-11 iziphakamiso, eli nqaku Mail Daily Uzama ukuseka ukuba ukuxhatshazwa ngokwesondo kunye nokuxhatshazwa kwezilonda kungabangela ingxaki yempilo yengqondo.
Nangona kunjalo amaqela abasetyhini alwa nokuchongwa okutsha okuzayo "Ukunyanzelwa kokuziphatha ngokwesondo" kuhlelo olutsha olucetywayo lwe-World Health Organisation's International Classification of Diseases (ICD-11) balahlekisiwe kalusizi. Akuyomfuneko ukuba boyike. Olu phononongo lucetywayo ALUYI "vumela ii-Weinsteins ukuba zingabikho." Le yindawo yokuthetha ejikelezwe ngumatshini wemithombo yeendaba ezingamanyala ukuzama ukonyusa ukuxhathisa kwisifo esichaziweyo.
Olu xilongo lwe-ICD-11 luya kuvumela abo basebenzisa iziyobisi, ngakumbi abancinci, ukuba baqonde ukuba banengxaki yokwenene kwaye bafumana unyango. Iya kuvumela nabahlohli ukuba benze uphando ngakumbi. Olunye uphando luye lwavalwa kuba “ingxaki ibingekho kwincwadana yesigulo.” Nokuba “Psychology Namhlanje”Imagazini yezengqondo e-US kodwa ifundwe ngokubanzi, ayivumeli iiblogger ukuba zibhale ngayo“ kuba ayikho. ”
Olu qhankqalazo oluchasene nokuchongwa kwesifo aluchanekanga. Kufuneka sincedise ekufundiseni abantu ngayo. Olu hlolisiso aluyi “kuzithethelela kumarhamncwa.” Zonke iziyobisi zihlala zinoxanduva ngezenzo zazo. Oku kusebenza kulwaphulo-mthetho ngokunxulumene nalo naliphi na ikhoboka: ukuzinxilisa ngokwakho 'ayisiyonto yokuzikhusela. Ngapha koko, uninzi lwamarhamncwa ALUKHO kwANYE iziyobisi. Oku kukudideka ngabom kweziganeko ezibini ezahlukileyo… ke iphonografi ayikaze ibhengezwe njengesiqhelo.
Nantsi i ibhloko lebhulogi esenzayo kumcimbi.
I-Equalities kunye neKhomishoni yamaLungelo oLuntu baye bafowunela kwiinkampani ze-FTSE100 kunye neminye imibutho emikhulu ukuba bathumele i-EHRC isicwangciso sabo sokunciphisa ukuhlukunyezwa ngokwesondo esikhathini esizayo. I-TRF sele iqhagamshelana namaqumrhu asebenzayo ukuba anikezele qeqesho lwezesondo ekukhanyeni koku.
Indoda ibakho ugwetywa eSweden lokudlwengula abantwana kwi-intanethi. Yongeza intsingiselo entsha ngokupheleleyo kumxholo othi 'irhamncwa elikwi-Intanethi' kwaye enye ingongoma 'kwingozi yomphambukeli'. Njengoko ubuchopho babo buyekelela ngenxa yotshintsho lobuchopho olwenziwe ngamakhoboka, amadoda amaninzi aya kunyuka afune iphonografi ngokungekho mthethweni njengokudlwengulwa kwabantwana kwimfuno. Izakuphendula njani iinkundla zethu? Yintoni esinokuyenza ukuguqula lo mkhwa? Ukuhlawula abantu ukuba babukele i-hardcore porn ayizukunceda. Jonga into yokuqala engentla.
I-Sexting iqhubekile kwizikolo ezizimeleyo nezikarhulumente ngokufanayo, ngokukodwa kwi-12-15 yobudala. Siye sitsho njalo le nto xa siqhuba iiklasi ezikolweni malunga nempembelelo yezempilo, yentlalo kunye neyezomthetho yokuthunyelwa kwe-post. Ulutsha lufuna inkxaso eninzi kangangoko ekhaya nakwi sikolo malunga nendlela yokujongana nale nto. Nazi ezinye uphando olutsha malunga neengxaki zokubambisana ezibandakanyeke ngakumbi kwiintombazana.
"Ukuthunyelwa kwemiyalezo yokuthumela imiyalezo kunye nokuthumela iifoto ezingabonakaliyo kunye nezisitabane eziqhubekayo ziqhubeka zihamba phambili kwintetho ephathelene nentsha. Nangona abaphandi bahlolisise imiphumo yokuthumelelana nge-post, abangaphantsi bayaziwa malunga nemingeni abaselula abajongene nayo xa benza izigqibo malunga nokuthumela iifoto. Ukusebenzisa i-akhawunti ye-intanethi ye-intanethi ethunyelwe ngabantwana abaselula, esi sifundo sihlolisisa iingxaki zentombi ezithambileyo ngokuthumela iifoto ezingenanto kwiontanga zabo. Uhlalutyo olucacileyo lweendaba ze-462 lubonisa ukuba abasetyhini abaselula bafumana imilayezo ephikisanayo eyabaxelela ukuba bathumele kwaye bayeke ukuthumela iifoto. Ukongezelela ekuthumeleleni iifoto ethembeni lokufumana ubudlelwane, abafazi abancinci baphinda babika ukuthumela iifoto njengomphumo wokunyanzeliswa ngabalingani besilisa ngohlobo lwezicelo eziqhubekayo, umsindo, kunye nosongelo. Abasetyhini abaselula bazama ukujonga iindlela zokuziphatha ezinobungqina babeselula kodwa bahlala bezama ukuthobela. Ukwenqatshwa kwakusoloko kudibana nezicelo eziphindaphindiweyo okanye izisongelo. Amanye amaqhinga ayengabikho kumaqela amabhinqa amancinci, abonisa ukuba abasetyhini abasenayo izixhobo zokuphumelela ngempumelelo kwimingeni abajongene nayo. "
Saya kumbutho weNyango yoLwaphulo loTywala kunye nokunyanzelisa (ATSAC) inkomfa eLondon ngoMgqibelo ngo-27 uJanuwari. Kwacaca kubathathi-nxaxheba, ngokukodwa kubalingani bezocansi kunye nabacebisi bezelamano, ukuba kwakukho imfuno enkulu kunye nomnqweno wolwazi olungakumbi malunga nefuthe le-intanethi yezoonografi kunye nokhetho lwezokwelapha.
I-TRF iyavuya ukufaka isandla kuloo mfuno nokubonelela ii-workshops ezigunyazisiweyo zokuqala ze-RCGP kwi-"Impact of Pornography kwi-Intellectual Health and Physical Health" e-UK. Iiworkshops ziza kwenzeka ngoMeyi: I-9 Ngamana e-Edinburgh; I-14 Meyi eLondon: I-16 Ngamana eManchester kunye ne-18 Meyi eBirmingham. Zivuleleke kwiingcali zezo zonke iindidi kwaye zixabise amaphuzu e-CPN ye-7. Nceda usasaze igama. Ukuze uthole iinkcukacha ezingaphezulu kwaye ubhalise uya www.rewardfoundation.org.
Ukuba uthe waphoswa le ngcewa yeblogi ebanjwe iqela leNoFap, nantsi Izizathu ze-50 zokuyeka u-porn.
Sasixakeke ngexesha lokufundisa ngoDisemba kwizikolo ze-3, iKholeji ye-Fettes, iKholeji yaseGeorge Watson kunye ne-St Columba, iKilmacolm. Abafundi bathanda ukufumana ithuba lokuthetha nokufunda ngempembelelo ye-intanethi yezobuqhetseba kwimpilo yabo kunye nobuchule bayo bokuba nobugebengu. Amantombazana ngokubanzi afuna ukwazi ngokuphathelele ubudlelwane, abafana bafuna ukwazi malunga nemithetho nendlela yokubajikeleza.
Unyaka wesithandathu abafundi banomdla kakhulu ukuva malunga nokutshintshwa kwikholeji okanye iyunivesiti apho kuncinci ukujonga ixesha kunye nomsebenzi. Uphando lubonisa ukuba nangona banobuqili, ukungakwazi kwabo ukulawula imikhwa yabo ye-intanethi kunokukhokelela kwiziphumo ezingekho mvavanyo, ukunciphisa ukusebenza kwesondo kunye nokunciphisa inzala ebuhlotsheni bokwenene.
Uninzi lwabo bathatha inxaxheba kwimithambo ye-Digital Detox yokuzivocavoca bayakufumanisa kunzima. Abanye bayamangaliswa ngabo banokuyenza-uninzi lwabafundi lulawula kuphela iiyure ezimbalwa okanye khange bakhathazeke ukuzama konke konke.
Ootitshala bathusayo kwiziphumo zophando ezivela kwimibandela malunga nokusetyenziswa kwefowuni kunye nomyinge wokulala kwabo abafundi babhala. Abafundi abaninzi bathi abafumani ukulala ngokwaneleyo kwaye ukuba bathatha inthanethi ikakhulukazi ngobusuku obubashiya benesiva "banamathele kwaye bakhathele" esikolweni ngosuku olulandelayo.
Nazi ezinye zeembono zabafundi:
Iyacaphukisa, kuba ndenze kakuhle ku-N5 kodwa ndisokola kakhulu.
“I-Snapchat 'streaks' ziye zangaphezulu, abantu babakhathalele ngakumbi kunayo nantoni na. Ayifuneki kwaye iyadandatheka. ”
"Andisebenzisi kakhulu amajelo onxibelelwano, ndidlala nje kakhulu nge-xbox."
"Ndiyakholwa ukuba abazali bam benze isigqibo esifanelekileyo ngokungavumi ukuba ndifake ifowuni yam ukuba ndilale nayo. Kuthetha ukuba andizange ndiboniswe ngetyhefu ngokukhanya okwesibhakabhaka kwaye ndilala ngokulula. Ndona ke kunjalo ndifumanisa ukuba ndiyithatha iifowuni xa ndingenanto 'yokwenza. Kuya kuba mnandi ukubona imiphumo ye-Digital Detox. "
“Ndiyazingca ngenene kwaye ndonwabile ukuba umntu ekugqibeleni undixelele ukuba ndihambe emnxebeni wam. andiyithandi ifowuni yam kodwa ndiziva ndiphantsi koxinzelelo lwabahlobo bam ukuba ndihlale kuyo ... ndinqwenela nje ukuba sibe ngabahlobo ngaphandle kokuhlala sisezifowunini zethu ”
Khangela kwiwebhusayithi yethu ukufunda kabanzi malunga nathi zikolo.
Kanye njengesikhumbuzo kubo bonke abafundi bethu, ngobudlelwano okanye hayi, kukho ezinye inzululwazi ukuwa ngothando. Usuku LukaValentine oluvuyayo luza 14th EyoMdumba.
I-Copyright © 2018 I-Foundation Foundation, Wonke amalungelo agcinwe.
Ufumana le imeyile ngenxa yokuba ukhethe kwiwebhusayithi yethu www.rewardfoundation.org.Idilesi yethu yeposi yile:
Yongeza kwincwadi yakho yee dilesi
Ufuna ukutshintsha indlela ofumana ngayo ezi meyile?
Unga hlaziya zakho iinketho or ungabhalisi phantsi kweli luhlu